Ihe ọmụmụ mbu | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Akụrụngwa: Ihe ọmụmụ mbụ
Nri ofe na sausaji ngwa ngwa - uzommeputa
Ihe na 25.06.2019 25.06.2019
Nri uto dị otú ahụ dị oke mma maka nri ehihie n'ụlọ. Ọtụtụ mgbe, n'oge ezumike ezumike, ọ dịghị ọchịchọ ịme nri na nri dị nro. Ihe dị mfe ma dị mfe, ga-amasị m na-enweghị ihe pụrụ iche ...
Nri akwukwo nri na millet - maka nri na nri nwa
Ihe na 30.03.2019 30.03.2019
Ebube magburu onwe ya n'akụkụ niile. Nutritious, na-abụghị kegriiz, ọma gbarie. A ghaghị gbanyụọ ya na nchịkọta nke ma ụmụaka ma ndị toro eto bụ ndị ọgwụgwọ ọgwụgwọ ma ọ bụ nri nri. Millet nwere ihe mgbagwoju anya ...
Nri ụtọ na salmon mmiri ofe - a ibu uzommeputa!
Ihe na 24.11.2018
Igwu ogwu azu ga-enyere gi aka iji ike gwuo gi ma mee ka obi gi di elu n'oge oyi. Anyị na-enye ya iji esi nri salmon na-esi ya, ọ na-abịa dị ala, ma ọ tọrọ ezigbo ụtọ. Ulo nke salmon, dika onwe m ...
Esi esi esi nri obụ mmiri na pasta?
Esi esi esi nri obụ mmiri na pasta? Nke mbụ, ntakịrị vermicelli na-amịpụta na obere mmiri nke mmiri nnu, mgbe ahụ, mgbe ọ fọrọ nke nta ka esi ya ya, na mmiri ahụ na-agbapụ, anyị na-enye mmiri ara. Were na obụpde, ntakịrị ...
Ọ dị m mkpa ịkwanye ọka bali tupu ị na-esi nri pickle?
Ọ dị m mkpa ịkwanye ọka bali tupu ị na-esi nri pickle? ị nwere ike tụfuo ya na anụ ma gbanye ya nke ọma - ọ ga-esi ísì ala. Ntụziaka dị na ngwugwu ahụ dị mma, mana ahụmahụ na-enye echiche na ọka bali ...
esi esi esi nri ofe magburu onwe ya?
Esi esi na kabeeji esi nri. A ghaghị iri nri na efere. Nwee obi ụtọ maka awa abụọ ọbụlagodi. Nri dị mma ka esi nri na ọkụkọ ma ọ bụ amị. Poteto ...
Kedu esi esi esi nri ofe n'ezie? Enwere ọdịiche dị n'etiti usoro uzommebe Europe na Siberia?
Etu esi esi ofe Russian kabeeji ofe? Enwere ọdịiche dị na ntinye nri ndị Europe na Siberian? http://www.sports.ru/tribuna/blogs/utkin/44550.html nwaa Ntụziaka ahụ sitere na Vasya Utkin. M ga-eme ndozi ozugbo - akpọghị m ya onwe m (nwunye m…
Esi esi esi esi nri esi nri?
Esi esi esi esi nri esi nri? M ga-agbakwunye n'elu. Gbaa mbọ hụ na ọ dịghị esi ngwa ngwa, ntakịrị ìhè. mgbe ahụ, efere ga-abụ apịtị. Na-etinye a di na nwunye nke nwa peas ...
Ego ole ka ose ga-esi gwọọ oyi?
Ego ole ka m ga-esi sie mọzụ jụrụ oyi? - Nkeji abuo na - nkeji 2 - Udara achara eghe Were akwa a carefullyara nke oma, tuo mmiri si ha ma tinye n’ime mmanu ahu ghere eghe na mmanu margarine ma obu mmanu akwukwo nri.
Esi esi esi nri obụ mmiri ara ehi?
Esi esi esi nri obụ mmiri ara ehi? A na-akwadebe efere na mmiri ara ehi zuru ezu ma ọ bụ ngwakọta nke mmiri ara ehi na mmiri. Ị nwere ike iji mmiri ara ehi na-emechi emechi na-enweghị shuga ma ọ bụ mmiri ara ehi niile. Mmiri ara ehi soups na-esiri na onyinye ...
Kedu esi esi nri azu sie ike n'ulo?
Kedu esi esi nri azu sie ike n'ulo? Tinye mmiri, obụpde poteto na gbakwunye obere nnu, dị ka poteto obụpde azụ azụ na mmanụ ma tụba yabasị finely chopped, let ...
Esi esi esi nri emeghi ulo na-enweghị àkwá
Otu esi eme ka ememe ememe na-enweghị àkwá Ngwá ọka ndị nwere ebe obibi 100 dị na ntụ ọka ntụ ọka gwakọtara na nnukwu efere, tinye nko nnu, 1 Art. l mmanụ ihe oriri ma wunye 3 Art. l mmiri esi esi ...
Ezigbo ụlọ ọrụ enyere aka! Biko kọwaa n'ụzọ zuru ezu esi esi nri pịkụl na pearl barley na ọkụkọ.
Ezigbo ụlọ ọrụ enyere aka! Biko kọwaa n'ụzọ zuru ezu esi esi nri pịkụl na pearl barley na ọkụkọ. Tags: anụ anụ (31), nri ndị Russia (35), pịkụl (3). Foto uzommeputa ...
Kedu ka broth chicken bara uru maka?
Kedu ka broth chicken bara uru maka? Ọfọn, ọ bụrụ na ị na-ele ọnọdụ ọgwụ nje na ọkụkọ ma na-arapara naanị na akwukwo nri na-adabere na nchegbu, ajụjụ ahụ bilitere. Kedu ka esi soro nitrates na ...
ma dee uzommeputa maka pike perch ofe?
ma dee uzommeputa maka pike perch ofe? Obere pike perch, eyịm, 100 gram nke obere tomato, 150 grams nke poteto, ose, nnu, elu. Sudak hichaa oghere na akpịrịkpa, na-asacha nke ọma ...
kedu esi esi esi esi esi esi esi nri?
kedu esi esi esi esi esi esi esi nri? naanị na yabasị A obere yabasị iri finely na steak na mmanụ na mmanụ na a saucepan. Tinye otu tablespoon nke ọka wit na-esi ísì ụtọ na nnu. Ọ bụrụ na ...
Ogologo oge ole ka esi esi nri ọkụkọ?
Ogologo oge ole ka esi esi nri ọkụkọ? A na-eji ọkụ ọkụ sie ngwa ngwa. Dị ka obụpde nkeji 20. Ịdị njikere dị mfe. Kpoo ọkụkọ na mma. Ọ bụrụ na ọ dị nro ma ọ dịghị ọbara ọ bụla, emesịa esie ya. Na ...
gwa m uzommeputa maka soseji chiiz ofe
Gwa m ihe m ji esi soseji ofe soseji N'ime ezinụlọ m, ofe nwere chiiz esichaghị nke ọma, mana m nwere mmasị na ya na soseji chiiz. Ana m enye Ntụziaka ahụ dịka edepụtara ya na isi mmalite - ...
Kedu esi esi esi sikwa na kabeeji ọhụrụ sie ya?
Kedu esi esi esi sikwa na kabeeji ọhụrụ sie ya? Hmm, achọtaghị m ụzọ nhazi nkịtị. Ndi mmadu ga esi uzo esi esi nri nke ozo.
Esi esi esi esi ogwu si na anu ogwu oyi kpue.
Etu esi esi ofe ero site na olu ojoo? olu mmanụ a honeyụ dị mma maka ighe eghe. yana ofe ero nkịtị, na-emeghe, belata, jiri ya karịa. eyịm - n'ụba, dị ka ọkara olu. ...
Ajuju 14 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 0,371.